Bitcoin Wallet Account တစ်ခုပြုလုပ်နည်း ~ Earning Online Myanmar
Home » PROCESSOR » Bitcoin Wallet Account တစ်ခုပြုလုပ်နည်း
Free7Movies2:28:00 AM 14 comments
အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ ဒီနေ့ Online မှာ Bitcoin ရှာနေကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက် မိမိတို့မှာရရှိလာတဲ့Bitcoin တွေကိုထုတ်ယူဖို့ သိုလှောင်ဖို့အရမ်းကောင်းတဲ့ Bitcoin Wallet တွေထဲမှာလူသုံးအများဆုံး ဖြစ်တဲ့ coinbase wallet ဖွင့်နည်း အသုံးပြုနည်း ကို အသေးစိတ်မဟုတ်ပေမယ့် အကြမ်းဖျင်း သိမ်းကြုံးပြီး ရေးပေးသွားမှာပါ ။ မသိသေးတဲ့ Beginner တွေသေသေချာချာ သိအောင်ရည်ရွယ်ပြီး ရေးတာပါ ။ သိထားပြီးသားလူတွေ ကျော်သွားလိုက်ပါ ။ မသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေတို့ အရင်ဆုံး ဒီကနေဝင် သွားပါ ။ အောက်ကပုံလိုမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Verify လုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ Coinbase bitcoin wallet ထဲတန်းဝင်သွားပါလိမ့်မယ် ။ ပေါ်လာတဲ့ပုံထဲက ဘယ်ဘက်တစ်ခြမ်းကိုဖြတ်ပြထားပါတယ် ။ Menu ကိုအောက်ကပုံထဲမှာတစ်ချက်ကြည့်ပါ ။
အပေါ်ကပုံမှာမြှားပြထားတဲ့ Tools ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
အပေါ်ကပုံမှာမြှားပြထားတဲ့ BTC bitcoin wallet address ကို Copy ယူပြီးသိမ်းထားပါ။
မိမိတို့ရှာနေတဲ့ BTC Site တွေမှာရရှိလာတဲ့ Bitcoin တွေကိုထုတ်ယူတဲ့အခါအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Bitcoin လက်ခံတာသိသွားပြီ ဆိုရင် ၊ မိမိမှာရှိတဲ့ bitcoin တွေကိုသူများဆီကို လွှဲပြောင်းနည်း ထပ်ပြပေးပါ့မယ် ။ အောက်ကပုံတွေကို ဆက်ကြည့်ပေးပါ ။
နောက်ဆုံးထပ်ပြပေးချင်တာကတော့ ကိုယ့် wallet ရဲ့ security ပိုကောင်းအောင် ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ ၂ ဆင့်ခံနည်းပါပဲ ။ အဲဒိအတွက် Setting >> security အဆင့်ဆင့်သွားပြီး ပုံထဲကအတိုင်းဆက်လုပ်သွားပါ ။
Bitcoin ဈေးနှုန်းဖေါ်ပြတာကို မြန်မာကျပ်ကနေ USD ဖြစ်ဖြစ် ၊ တစ်ခြားနိုင်ငံသုံး ငွေကြေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြောင်းချင်ရင် Setting ကိုဝင်ပါ ၊ ပြီးရင် Preferences ထဲမှာ ၀င်ပြင်ပါ ။
ဒီလောက်ဆိုရင် Coinbase Bitcoin wallet အကောင့်ဖွင့်နည်းနဲ့ Security2step ခံနည်း ၊ အသုံးပြုနည်း တွေကိုအတော်အသင့် နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ။
BTC CLICKS မှာဝင်ငွေရှာနည်းကို ဒီမှာလေ့လာလိုက်ပါ။
ONLINE ငွေရှာရန်အကောင်းဆုံး PTC SITE များသို့>>>
BTC CLICKS က bitcoin ကိုထုတ်ယူမတတ်ရင် Comment မှာပြောခဲကြပါ။ BTC CLICKS က bitcoin ထုတ်ယူနည်းကိုတင်ပေးပါမည်။
Blogger July 21, 2017 at 7:09 PM
Ads4BTC isabig Bitcoin Work-From-Home platform which allows you to earn Bitcoins just for viewing ads and participating in micro-jobs.
Blogger July 21, 2017 at 8:09 PM
Blogger July 22, 2017 at 2:32 AM
Blogger July 22, 2017 at 11:10 AM
Blogger July 22, 2017 at 1:02 PM
Over at Moon Bitcoin you can get free bitcoins. 290 satoshi every 50 mins.
Blogger October 19, 2017 at 2:48 AM
Blogger November 9, 2017 at 1:21 PM
Blogger November 10, 2017 at 9:29 AM
Blogger November 19, 2017 at 12:21 AM
Blogger November 19, 2017 at 10:15 AM
Blogger November 24, 2017 at 8:00 PM
Cyril April 19, 2018 at 3:22 PM
The quantity of prizes to be given away is frequently in light of the quantity of participants, notwithstanding the monetary allowance provided. voodoodreams
keymo luck August 10, 2018 at 5:14 AM
bitcoin ကို မြန်မာငွေထုတ်ချင်ရင် ဘယ်လို ထုန်ရမလဲ?